Ergadda doorashada Madaxweynaha Jubbaland oo laga dhigay 500 oo xubnood – Radio Daljir
Abriil 7, 2013 2:02 g 0
Kismaayo, April 7, Ka qaybgalayaasha shirka Kismaayo ayaa maanta isku raacay in ergadda dooranaysa Madaxweynaha Jubbaland laga dhigo 500 oo xubnood, oo laga soo xulo dhamaan beelaha degan goboladda Jubbaland State of Soomaaliya.
Ka qayb galayaasha shirku waxay labadii maalmood ee u danbeeyey ka doodayeen tirada ergadda iyo qaabka loosoo xulayo waxaana ergooyinku isku raaceen in qaab degmo loosoo xulo kadibna loo qaybsado nidaamka beelaha dega goboaldaasi.
Maxamed Aadan Boolis oo ka mid ah ergada ka qaybgalaysa shirkaas ayaa Radio Daljir u sheegay in ergada la xulayo maalmaha soo socda islamarkaana dhowaan ay guda geli doonaan doorashadda Madaxweynaha Jubbaland iyo xulista xildhibaanadda Baarlamaanka ee Jubbaland.
Dhinaca kale Waxaa magaalada Kismaayo ka ?soconaya abaabulka iyo orodka ay ugu jiraan madaxnimada Jubbaland rag u ordaya inay hogaanka u qabtaan sadexda sano ee soo socota maamulka Jubbaland.
Maxamed Ibraahim Shakuul oo ah ganacsade Soomaaliyeed oo degan magaalada Nairob sidoo kalena ah shiikh caan ku ah diinta islaamka ayaa ku dhawaaqa musharax nimadiisa xilka madaxnimo ee maamulka Jubbaland.
Sh Shakuul wuxuu sheegay inuu ahmiyad weyn siin ?doono ka shaqaynta arimaha bulshada sida caafimaadka, ganacsiga , biyaha iyo beeraha oo Jubbaland caan ku tahay.
Sidoo kale Sh Axmed Maxamed Islaan ( Axmed Madoobe) ayaa shaaciyey musharaxnimadiisa xilka madaxweyne nimo ee maamulka Jubbaland isagoo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayuu sheegay in hadii la doorto oo waxbadan oo horumar ah ka samayn doono Jubbaland.
Jubbaland oo hada la dhisayo ayaa xilka madaxtinimo ee maamulkaasi waxaa u taagan rag badan qaar shaaciyey iyo kuwo aan weli shaacinba, waxaana dhamaan umada Soomaaliyeed indha ku hayaan ugu danbayn waxa kasoo baxa Kismaayo.